Indlu yeeNdwendwe eHof í Vatnsdal
Unquphantsi sinombuki zindwendwe onguEline Manon
Indlu ekhethekileyo kakhulu, idome yakho encinci, kwintlambo entle. Indawo entle yokonwabela indalo kwaye ube yinxalenye yeIceland. KwaHof siqhuba ifama eneegusha namahashe, kunye nendlu encinci yeendwendwe. Kwaye wamkelekile ukuba uzibandakanye nathi!
Uya kuhlala kwindlu yethu encinci ekhangeleka njengedome. Kukho amagumbi amaninzi, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi. Iimbono ziyamangalisa, indlu iya kuba mnandi kwaye ipholile. Kwafakwa ishawari entsha ngoSeptemba 2017 kunye nomgangatho omtsha osezantsi ngoJanuwari ka-2019.
Iibhedi ezinkulu eziyi-2, ibhedi elala umntu omnye eyi-1
Iibhedi ezinkulu eziyi-2, 1 iisofa eziyi-
4.53 out of 5 stars from 646 reviews
4.53 · Izimvo eziyi-646
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi646
Indawo yethu isecaleni komlambo we-salmon, ojikelezwe ziintaba kunye neengxangxasi kunye nehlathi elinemithi emalunga ne-70.000. Kwifama yethu kukho iigusha ezingama-650, amahashe angama-65, iinkukhu nezinja ezimbini.
Umbuki zindwendwe ngu- Eline Manon
Sizakubakhona xa unemibuzo kwaye ungasoloko usitsalela umnxeba ukuba awusiboni!